Fampiharana maimaim-poana 5 na amidy mandritra ny fotoana voafetra (7 Janoary) | Vaovao IPhone
Fampiharana 5 maimaimpoana na amidy mandritra ny fotoana voafetra (7 Janoary)
Sabotsy sabotsy ...! Ary izay rehetra manohy ilay teny amin'ny rima hoe izy no tena tiany satria nandritra izany fotoana izany dia nanao dia an-tongotra hafa namakivaky ny App Store aho ary nahita vitsivitsy hafa lalao sy fampiharana amin'ireo izay karama fa azontsika atao izao ny maimaim-poana na farafaharatsiny miaraka amin'ny fihenam-bidy mahaliana. Raha nanao ratsy taminao ny Magy, androany ianao dia afaka manonitra kely azy amin'ny alàlan'ny fanararaotana ireo tolotra ireo.
Fahasalamana, sary, fanabeazana, famatsiam-bola ... Na eo aza izany, misy kely ny zava-drehetra, fa ny tsy tokony hohadinoinao dia momba ny tolotra voafetra ny fotoana ary tsy afaka manome toky afa-tsy aho fa misy izy ireo amin'izao fotoana famoahana ity lahatsoratra ity. Tsy fantatsika hoe rahoviana no vita izy ireo, satria tsy nanambara izany ireo mpandraharaha ary mbola tsy manana fahefana aho, noho izany, raha liana amin'ilay tolotra ianao dia raiso izany! Aorian'izay, raha tsy izany no antenainao dia azonao averina any amin'ny App Store izany ary averinao ny volanao, raha nandoa zavatra ianao amin'izany.
1 Taorinan'ny dingana: Mpamafa ny mombamomba ny sary & Easy Photo Editor
3 Fanasitranana mozika 3
4 Air Radio Tune
5 Universe simulator
Taorinan'ny dingana: Mpamafa ny mombamomba ny sary & Easy Photo Editor
Tsy fantatro ny fisian'ity fampiharana ity fa raha vantany vao hitako maimaim-poana dia natomboko ny misintona azy, indrindra satria mety ho tena ilaina izy io amin'ny fotoana hiasako avy amin'ny iPad, ary hahafahako manamboatra montage misy sary hafa, iray amin'ireny izay sarotra be 😅.
AfterCut io no "fomba mora indrindra hanapahana sy hananganana sary"; Amin'ity rindranasa ity dia afaka misafidy sy manaisotra zavatra avy amin'ny sarinay izahay noho ny safidin'ny torolàlana na "manan-tsaina", manova ny ambadika ary manampy maherin'ny 40 sivana ary mihoatra ny 300 ny vokany tao anatin'ny segondra vitsy monja: aloka, soritra, ampahany, vera, pensilihazo, blur, tantara an-tsary, mozika ary maro hafa ..
Ho fanampin'izay, ahafahanao manafatra sy manondrana sary amin'ny endrika PNG mangarahara.
Taorinan'ny dingana: Mpamafa ny mombamomba ny sary & Easy Photo Editor Izy io dia manana vidiny 1,99 euro mahazatra ao amin'ny App Store fa raha maika ianao dia azonao atao maimaimpoana zato isan-jato izany.
Hipstamatic Izany dia fakantsary fakana sary ho an'ny iPhone izay hanosika anao hampiseho ny fahaizanao rehetra.
Makà sary tsara tarehy toy ny fiainana ary lasa ampahany amin'ny fiarahamonina mamorona indrindra eto an-tany, amin'ny iPhone ihany.
Hipstamatic Izy io dia manana andiana maodely, endrika ary fiasa iray manontolo izay mahatonga azy io ho fampiharana tsy manam-paharoa:
ClassicMode- Mamela anao hitifitra ny fomban'ny sekoly taloha amin'ny fakantsary natao tamim-pahagagana hahafahanao manova ny solomaso, mamirapiratra ary mitifitra amin'ny fikosehana.
ProMode- Makà fifehezana faran'izay betsaka amin'ny fakantsary amin'ny alàlan'ny fanitsiana ny fifantohana, ny fifandanjana fotsy, ny fiparitahana, ny hafainganan'ny shutter, ny tahan'ny ISO ary ny lafiny amin'ny refy mazava.
Darkroom Suite- Fikirakirana fanitsiana feno ahitana 20+ fitaovana fakantsary matihanina sy endrika 12 efa voafaritra.
Shop HipstaMart- Mizaha fonosana sivana mahavariana noforonin'ireo mpanao sary famoronana malaza eto an-tany, azo vidiana ao anaty fampiharana
PrintLab: mahazo fahatsapana ara-batana mivantana eo am-baravaranao; mandefa any amin'ny firenena 200 mahery isika.
Hipstamatic Izy io dia manana vidiny mahazatra 2,99 euro fa ankehitriny azonao atao izany amin'ny fihenam-bidy 33% amin'ny 1,99 Euros fotsiny.
Hipstamatic Classic€ 3,49
Fanasitranana mozika 3
Izany dia fisafidianana feo sy mozika mampihena izany dia hanampy anao hiala amin'ny tontolo sy hanana torimaso sy fiainana tsara.
Fanasitranana mozika 3 Izy io dia manana vidiny mahazatra 0,99 euro fa ankehitriny azonao atao maimaim-poana tanteraka izany.
Fanasitranana mozika 3€ 1,09
Mila fanazavana vitsivitsy ity fampiharana ity: mihaino onjam-peo maherin'ny 30.000 avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao sy ny karazana rehetra amin'ny alàlan'ny iPhone, iPad na iPod touch-nao. Azonao atao ny misafidy ireo gara tianao, mamorona playlist ary maro hafa. Mazava ho azy fa mila mifandray amin'ny Internet ianao.
Air Radio Tune Izy io dia manana vidiny mahazatra 0,99 euro fa ankehitriny azonao atao maimaim-poana tanteraka izany.
Rindrambaiko fanabeazana izay hanampy anao fantaro irery ny rafitraamin'ny fomba tsy mampino: planeta, kintana, orbita ary izay rehetra azonao eritreretina ao amin'ny rafi-masoandro, izay eo am-pelatananao izao ..
Universe simulator Izy io dia manana vidiny mahazatra 0,99 euro fa ankehitriny azonao atao maimaim-poana tanteraka izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Fampiharana 5 maimaimpoana na amidy mandritra ny fotoana voafetra (7 Janoary)
Cuttlefish dia mampiasa loko kisary amin'ny menus 3D Touch